FALANQAYN KOOBAN IS-DIIDDOOYINKA MIISAANIYADDA 2018
Saturday April 14, 2018 - 18:17:59 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Waxaan falanqayn kooban ka bixinayaa miisaaniyadda qaranka 2018 ee ay golaha Wakiillada Somaliland dhowaan ansixiyeen.
Waxaan si guud mar ah u soo bandhigi doonaa sida aanay miisaaniyaddani uga turjumayn baahida bulshada iyo adeegyada ay u baahan yihiin. Tusaale ahaan, maanta waxay ahayd in wasaaradaha wax-soo-saarka iyo kuwa bixiya adeegyada bulshada miisaaniyadahooda la xoojiyo, sida wasaaradaha biyaha, beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga, macdanta iyo tamarta, deegaanka iyo ganacsiga & warshaduhu ugu yaraan ay noqdaan 25% miisaaniyadda ah. Sidoo kale cadaaladda, waxbarashada, caafimaadka, arrimaha bulshada, jidadka, ciyaaraha, duulista, diinta iyo awqaaftuna ay 25% miisaaniyadda noqdaan. Laakiin arrinku sidaas wuu ka duwan yahay. Qodobbadan hoose ayaa ka mid ah is-diiddooyinka horumarka iyo miisaaniyaddeenna: